MUQDISHOOY, colka waraf ma lagu dayay? Rag ayaa is weydiiyay hadda ka hor “ma taako ayaan dhaqaaqnaa mise tabar”? – War La Helaa Talo La Helaa
MUQDISHOOY, colka waraf ma lagu dayay? Rag ayaa is weydiiyay hadda ka hor “ma taako ayaan dhaqaaqnaa mise tabar”?
By madoobe	 Last updated May 15, 2019
MUQDISHOOY, colka waraf ma lagu dayay? Rag ayaa is weydiiyay hadda ka hor “ma taako ayaan dhaqaaqnaa mise tabar”? Markaasey qaar dhaheen ” aan tabar dhaqaaqno”.
Sabab walbo haku timaadee, magaalada Muqdisho iyo Gobolka Banaadirba weli ma yeelan maqaam dastuuri ah. Waxaa taas usii dheer in madaxda Gobolka iyo caasimadda Muqdishaba aan lasoo dooranin balse ay ku yimaadaan magacaabista Villa Soomaaliya. Waxeey taasi ka dhigtay farac ka mid ah xafiisyada laga soo magacaabo.
Sida xaqiiqada ah, Gobolka Banaadir madaxdiisu ma qaadan karaan go’aanno u gooni ah oo ka tarjumaayo danaha iyo rabitaanka shacabka ay magacooda huwan yihiin. Si lamid ah na ma yeelan karaan aragti siyaasadeed oo aan ahayn tan kasoo fusha xafiisyada madaxda qaranka. Sidaa daraadeed, macno ma sameyneyso in lagu qanciyo marwalbo in ay ka muuqdaan oo korjoogto ay ka ahaadaan shirarka dowlad goboleedyada iyo dowladda federalka.
Maxaa Xal ah marka?
Si loo helo matalaad dhab ah iyo maqaamka magalaada Muqdisho iyo tan gobolka oo aan leys weydiininba, waxeey aniga ila tahay:
1. in la abaabulo shir ay kasoo qeyb galaan duubabka iyo odayaasha dhaqanka, indheer garadka iyo ururada u dhaqdhaqaaqa bulshada ku dhaqan gobolkaan.
2. In kulankaas looga doodo sida ay ku sameysan karaan maamul shaqeeyo 2 sano oo ku meel gaar ah, kana yimaada dadka deegaanka. Maamulkaas oo waajibka ugu weyn noqonaayo raadinta xaquuqda reer Muqdisho si dastuurka waafaqsan. La gu ma eedi karo maamulada laga soo magacaabo xafiisyada madaxda qaranka, in isla xafiiski soo magacaabay ama golayaasha sharci dajintaba ay ka furaan dood iyo dacwo aysan ogeyn natiijada ka dhalan kartaahi (casilaad).
3. In muhiimad gaar ah lasiiyo sida ay hay’adaha amniga iyo garsoorka gobolka toos ugu hoos imaan lahaayeen maamulka ku meel gaarka ah, si amaanka magaalada u yeesho cid ka sukeysa federalka oo lagula xisaabtamo.
4. In leysla meel dhigo tirada ugu macquulsan oo uu yeelan karo gole deegaan oo ku meel gaar ah, iyadoo si cadaalad ah loogu qeybinaayo bulshada, hab beeleed. Haddii kalana leysla qaato qaabki uu u dhisnaa xilligii Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo Ra’iisul Wasaare Nuur Cadde ay joogeen.
5. In kulanka la is kula meel dhigo sida ay dowladda federalka iyo maamulkaasi u qeybsan karaan dakhliga kasoo xaroodo gobolka. Waa middaas caqabadda ugu weyn ee haysata in uu meel fuulo maqaamka Muqdisho. Waana sababta ugu weyn ee ay uga gaabiyeen dowladihi ka horreeyay tan Madaxweyne Farmaajo. Anigu waxaan soo jeedin lahaay in si ku meel gaar ah loo qaato 30% dakhliga guud ( illaa iyo inta ay dowladdu ka hananeeyso inta badan gobolada dalka). Xataa haddii la sameeyo sharciga lagu wadaagaayo canshuuraha iyo dakhliga kalee dalka.
6. Marki arrimahaas leysla meel dhigo, oo la diyaariyo dhismaha maamulka iyo sida uu rabo in uu wax ula qeybsado dowladda federalka, hala sameeyo guddi qaada oo kasoo iibiya madaxda qaranka, kalana soo gorgortamo wixii macquul ah ee ka dhimis iyo ku daris u baahan. Marki leysla soo meel dhigo taas, meeshana laga saaro cabsida laga qabo ‘boqolkiiba’ inta uu qaadanaayo maamul uu yeesho gobolkaan, halagu dhawaaqo shirweyne ay garwadeen ka tahay dowladda federaalka iyo wasaaradaha shaqada ku leh, si loo diyaariyo dastuur iyo gole deegaan oo doorasho ku yimaado, ka dibna sii doorta madaxdi hogaamin laheyd.
Maamulkaas wuxuu la mid noqon karaa sida midkii ka jiray Jubbaland, kaddib markii ay sidaas ku heshiiyeen dowladdii hore iyo madaxdii maamulkaas. Maadaama cidda ay wax kaaga xiran yihiin ay tahay dowladda federaalka, halaga ilaaliyo fikrado ama hadallo dhalin kara kala shaki iyo kala fogaansho. Hana lagu war galiyo billowga hore in kulamadaan aysan caqab ku noqoneyn dowladda, korjoogtana ay ka ahaan karaan. Maslaxada gobolka si loo ilaaliyo, halaga fogaado haddii ay jiraan siyaasiyiin raba ineey uga faa’iideystaan culeys siyaasadeed in ay uga dhigaan madaxda qaranka.
Waxa aad rabto haddaad weyso, waxa aad ka badin weyso ayaa la qaataa.
DEG DEG+FIIRSO: RW Kheyre & Wasiir Goodax Barre oo shir gaar ah yeeshay & Go’aan culus oo la hordhigay Goodax Barre